NASSAT | I-Satellite Satellite - iDGNSS - iDGPS - GLONASS
Umboneleli we-Intanethi ye-Intanethi NASSAT-Uphakamileyo.
DGNSS, iDGPS, GLONASS, GPS, ukhuseleko kunye neTelemetry.
I-DGNSS yezicelo ze-DP - i-GPS kunye ne-GLONASS
I-NASSAT inikezela ngeenkonzo eziphezulu ze-DGPS zokubeka umhlaba, izicelo zolwandle nolwandle. Iphutha kwimida phakathi kwe5 kunye ne-10cm. Inkqubo ibonakaliswe ngezixhobo zokufumana izixhobo ezifanelekileyo, ezifanele ukunyuka kwiinqwelo, iinqanawa, i-tripods okanye "usepack".
I-NASSAT isekela izicelo kwiinkalo ezininzi zamashishini, kuquka ZoLimo (ukuchaneka kwezolimo), uphando lwezobugcisa, ukwakhiwa kunye nemephu kunye ne-GIS. Izicelo zomhlaba ziquka ukutsalwa kwezityalo kunye nezifundo ze-geophysical. I-NASSAT iphinda ibe yinto ebalulekileyo ekusebenzeni kwemoto yokuzimela.
Ukususela kwi-2003, i-NASSAT inikezela ngeenkonzo kwizolimo. I-NASSAT inika indlela yokwandisa i -gronom and control of some variability inxulumene nemveliso yezityalo, ukuvumela abalimi ukuba baphuculise izivuno ngexesha lokunciphisa iindleko zokufaka.
Amacandelo ezenkcubeko ngokuchanekileyo anganceda yonke imimandla yomjikelezo wokuvelisa isityalo, ukususela kumalungiselelo okulala lokulala ukuya ekuvuneni. Uluhlu lweenkonzo zeNASSAT luncedo kakhulu:
Ulawulo loLwazi ngezoBomi
Izicelo zezinto eziguquguqukayo zomhlaba kunye nesantya sokujikeleza
Imephu kunye nokumakisha kwemida
Ukuvunwa, hlwayela kunye nokufumba i-fumigate ngexesha lexesha
I-Topography, imayini kunye nokwakhiwa
Nciphisa iinkqubo usebenzisa uhla lwe-NASSAT lwezisombululo ze-DGNSS ezichanekileyo. Ngo-NASSAT, iinkampani zinokuqinisekiswa ngokufihlakeleka komhlaba kunye nokuchanekileyo kwehlabathi ukuhlangabezana neemfuno zazo zonke iinkonzo zamazwe ngamazwe.
Ngokusebenzisa i-NASSAT, iinkampani zinokuqinisekisa ukuba indawo ezifanelekileyo, iimpawu zezobugcisa kunye nezinye iinkcukacha zendawo zichanekile, ukugcina ixesha kunye nokuphepha iimpazamo ezibiza. Inkonzo ye-NASSAT DGNSS inokukunceda namashishini athile ngokulawula izixhobo zokusebenza. Umzekelo, ngokusebenzisa iisombululo ze-NASSAT eziphambili zokubeka izicwangciso, abaqhubi bezimayini banokuqinisekisa ukuba ukuqhuba kwenziwa kwipateni elawulwayo usebenzisa izilungelelwaniso zokuqhafaza kwangaphambili ngaphandle kwemfuno yabamakishi.
I-NASSAT isixhobo esibalulekileyo ku:
Isixhobo sokufunda ngaphambili
Imephu & GIS
Iinkampani kwiindawo ezikude zingathembela kwi-NASSAT ukuba zibonelele ngeendlela ezichanekileyo zokubeka izicwangciso. Izisombululo ze-NASSAT zivumela ukuqokelela idatha kunye "nezinto ezithintekayo" ukuba zenzeke naphi na kwihlabathi kunye nokucwangciswa okuncinci kwaye ngaphandle kwemfuneko yokukhutshwa kwemali enkulu.
Iinkonzo ze-NASSAT ziya kunika ithemba ngokupheleleyo ukuba idatha yolu vavanyo oluchongiweyo inokuthenjelwa kwaye ichanekile. I-NASSAT iphinde isekele uluhlu olubanzi lwezixhobo ze-GPS ezifumaneka kwizixhobo zokusebenza ezikhokelayo.
I-NASSAT inceda iinkampani ze-GIS ukuba ziphumelele ukwenza imisebenzi eyahlukeneyo enxulumene neshishini, kuquka:
Izifundo zolimo kunye namahlathi
Indawo yezixhobo kunye nemibhobho
Iinkqubo zolawulo olukhawulezileyo
Imephu yemigangatho yeenkonzo kunye neempahla zikawonkewonke
Uphononongo lwezakhiwo kwizakhiwo
I-NASSAT iphucula umgangatho weziphumo kwi:
Tweets ngu @iNassat